ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧဘၪဆဲၫ့ ဝံးယရုစလံၫ့အဆၧဂၭဂီၩ့. | Radio Veritas Asia
တၭထီးနၥံၪအ့ၪဒၪဘၪ ၥုၭဖိၪၥ့ၪဖိၪအီၪဝၬဖီၩ့ ယရုစလံၫ့နီၪ ၥ့ၪယၫနၥံၪဝ့ၫ လၧအဆၧအီၪယူဝ့ၫဘူၭထၪ့ယူၭလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦအီၪလၧခးယုဒၫအဖၧၩ့လဖၪနီၪ, မွဲအစဲၪ့လၧခိၪလီၩ့ဆံၭ. တၭၦအီၪလၧဒိၩ့ဖၧၩ့နီၪ, မွဲအစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧခီၫ့ဆံၭ. တၭၦအီၪလၧမံၩ့လၬကျၩလဖၪနီၪ, မွဲအထီးထဲၩ့နုၬထဲၩ့ လၧဒိၩ့ဖၧၩ့လဂ့ၩ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧလၧမုနံၩလဖၪနီၪ, မွဲဆၧဖ့ၪ ထဲၩ့ဆၧအၧၩ့အမုနံၩၥံၪ, ဘဲၫၥိၭဆၧကွ့ၭအၥၭမိလၧၫ့ ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫထီးအလူၬလီၫ.
ဆၧလၧမုနံၩလဖၪနီၪ, ၦလၧအဒၧၩ့, ဒဲၦလၧအဒုၭ အၪ့နူလဖၪနီၪ ဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧၡၪ့ဖၭဒိၪမိဘၪခးလဘံၪ့ယီၩတၭ, ဆၧၥၭထၪ့မိဘၪ ၦလဆၨၩယီၩလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪမိဘၪၥံၫလၧနၭတၭ, မိဘၪဆၧဆိၬခွံၬဝ့ၫ လၧၦကိၭအဆၨၩဒ့ၭ အကျၩတၭ, ၦ ဆၨၩအဂူၫဂၩၥံၪနီၪ ဘိၩ့အမုအလၩ လချႃၭလၧၫ့ထၪ့ ဎွ့ၩထၪ့ဒံၭဘၪနီၪ, မိယဲးထဲးယရုစလံၫ့လီၫ.
တၭဆၧလၩ့လၭမိအီၪထၪ့ လၧမုအလီၩ့ ဒဲလၧလၩအလီၩ့, ဒဲလၧၡၪၥံၪအလီၩ့, ဒဲဆၧကၪဆၧဂဲၩ, ဆၧခိ ဆၧဝီၩမိဘၪၦၡၩအဆၨၩၥံၪ လၧဂၪ့ခိၪချိၫ့, လၧမၫဆမံၭ ဒဲလပီၩလဖၪမိၥီၫထၪ့အကၠီၩ့လီၫ.- ၦၡၩၥံၪမိၥၭမဲၪဆၧတၭ, မိအၪ့ယိၪဆၧလၧ ဆၧမိမၩအၥၭလၧ ဂၪ့ခိၪအဂဲးတၭ, မိၥံၫဝ့ၫလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မူၭခိၪအစီၩ့အမၩ့နီၪ မိဝၭဒိၪမၬလီၫ.- ထီးနီၪလဖၧၫ့ ၦမိဒၪဘၪၦၡၩအဖိၪခွၫယီၩ ဂဲၫထူၬဆၧအုၪ့ အီၪဝ့ၫလၧအစီၩ့ဒိၪအမၩ့ဒိၪ, ဒဲအလၩဒိၪအဖၩ့ဒိၪလီၫ.-
ထီးဆၧနီၪလဖၪမၩအၥၭတၭ, ဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့နၥံၪ အမုအလၩဘၪဘူၭထၪ့ယူၭတၭ, မိၬထၪ့နၥံၪအခိၪ, ယိထၪ့ဆၧဆံၭ.